DA-GP28001 igba ígwè cookware elu mma
Echọta pan nke nwere akụkụ anọ nwere akụkụ ọgịrịga, pan a na-eghe eghe na-enyere gị aka sie nri egiri egiri dị ka kebabs, paneer, inine na ọtụtụ n’ime nkeji ole na ole. Isi ọgịrịga nke pan a na-enye aka n'ịchịkọta abụba. Ọ na-atọ ụtọ ma na-acha akwụkwọ ndụ.
Smart Design na-ekpokọta Aesthetics na Arụ
ihe imi ihe pan ana achi achi elu okpomọkụ conductivity, si otú na-enye elu arụmọrụ mgbe isi nri. Igosipụta ihe ergonomic na-adị jụụ mgbe ejiri ya na stovetop
Ndị na-ahụ n'anya n'èzí na-ahọrọ ụdị maka nnukwu ogbe frying na nri; mgbe mkpuchi okpukpu abụọ dị ka oval griddle. Jiri osi nri a na osi ite n’èzí iji ghee azụ, ọkụkọ, mgbaaka yabasị na fries; ma ọ bụ jiri kwadebe nri otu ite nke stew ma ọ bụ chili. Gbanwee mkpuchi sara mbara iji ghee nnukwu nri ụtụtụ, ndị na-eri nri, sandwiches na fajitas! Ọzọkwa kichin eji na sọrọ burner stovetop. Ihe ọ bụla oge ọ bụla, iji Cast Cast Cookware esi nri na-atọ ụtọ ụtọ njem njem gị.
Enwere ọtụtụ elele nke isi nri na iron cookware. Otu n'ime ndị isi uru ịbụ isi na obere mmanụ ozugbo ị nweta ezigbo sizinin na gị cookware. Nke a na-enye ohere maka obere mmanụ na-ete mmanụ na obere mmanụ iji nweta eriri ajị na-acha aja aja. Ọzọ uru bụ na mgbe eji igba ígwè cookware ígwè ga ndammana wusie ike gị nri na ígwè. Na mgbakwunye nke a bụ nnwere onwe kemịkalụ na ndị ọzọ na-abụghị osisi pans dị ka Teflon ma ọ bụ Efere.
DA-GP32001 igba ígwè cookware mere na china
DA-GP38001 igba ígwè DISA elu mma mere na china
DA-GP28001 cookware emere na china 2020 na-ere ire ere
DA-GP22001 igba ígwè DISA 2020 ire ere
DA-GP34001 / 34002 igba ígwè DISA mere na china
DA-GP26001 igba ígwè elu àgwà 2020 ọkụ ire ere
DA-GP27001 / 39001 igba ígwè cookware 2020 na-ere ọkụ
DA-GP11001 / 13001/16001/18001 cookware emere na china 2020 na-ere ire ere
DA-GP26003 igba ígwè elu mma cookware